Ukudlala kukaGoogle sele kuvavanya uyilo olutsha lwezinto ezibonakalayo | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Kudala sibona ukuba zenziwa njani iiveki ezimbalwa Olunye utshintsho olukhulu lwenziwa kuGoogle Play. Iivenkile zesitayile se-Android ezenzelwe i ngenisa ii-icon eziguqukayo. Ukongeza, ibisenza utshintsho malunga nokusebenza iiveki ezimbalwa, njengoko kunokubonwa kutshanje ngokwaziswa kwe- izimbo zomzimba ezikuyo. Ngoku, siyazi ukuba kuya kubakho uyilo olutsha kungekudala.
Njengoko kulisiko kwinkampani, Uyilo olutsha olusekwe kwi-Material Theming. Uninzi losetyenziso lwenkampani sele lunoyilo olusekwe kule migaqo, njengeGoogle Drayivu kutsha nje. Ngoku lithuba likaGoogle Play ngokwalo. Uyilo esele lubonile, nangona okwangoku likwisigaba sovavanyo.
Kodwa sele silubonile olu loyilo lutsha ukuba ivenkile yesicelo se-Android izokwazisa kungekudala. Ke sinokufumana umbono wento onokuyilindela kuyo. Nangona ngale ngqiqo, ivenkile ihambelana kakuhle noko kulindelwe kuyilo olusekwe kwi-Material Theming. Kuba umbala omhlophe ulawula ngokucacileyo ujongano ngamaxesha onke.
Okwangoku, akukho nto ikhankanyiweyo malunga nomhla apho iGoogle Play izakwazisa ngokusesikweni lo uyilo. Kulindeleke ukuba ube kulo nyaka. Kukho amarhe okuba iinyanga zinokubakho xa kusenziwa uhlengahlengiso olukhulu esitolo. Kubonakala ngathi oku kuyinyani, ngokusekwe kolu lwazi lutsha. Yinto nje yokulinda ukuba iimvavanyo zigqitywe. Nangona inkampani ngokwayo ingakhange ithethe nto ukuza kuthi ga ngoku.
Uyilo olutsha kuGoogle Play
Kukho uchungechunge lwe utshintsho olukhulu kolu uyilo lutsha lukaGoogle Play. Nangona kunokwenzeka ukuba abasebenzisi abaninzi sele bebonile ekuqaleni, ngakumbi xa kuthelekiswa nonxibelelwano lwangoku olunevenkile yesicelo se-Android. Zeziphi izinto eziguqukileyo kule nkalo?
Ngokuthe ngcembe siyibonile indlela imibala ebephulukana ngayo nobukho kuGoogle Play. Ngoku bekukho intwana eluhlaza eluhlaza, ethe yanyamalala nakuyilo olutsha. Ngoku simi ngaphambili ujongano kuko konke okumhlophe. Kuphela ziimpawu okanye iibhanile ezinika umbala. Nangona le hue imhlophe inokuvumela imowudi emnyama ukuba yaziswe ngcono. Into enokuza evenkileni kwixa elizayo. Ewe imibala yamacandelo igcinwe, kodwa kule meko icacisiwe kancinci. Ke ngumbala omhlophe olawulayo.
Kwelinye icala, ibha yokukhangela itshintsha indawo. Inokufumana abalandeli abaninzi okoko yafika kwakudala. Ngoku, iya kuba yinxalenye ebalulekileyo yomdlalo weGoogle Play. Kule meko, iyaqhubeka emazantsi evenkile. Inokuba yindawo efanelekileyo ngakumbi kubasebenzisi. Kuba ivumela ukukhangela okungcono ngawo onke amaxesha. Ukongeza, kubonakala ngathi icandelo lomculo liyanyamalala kule bar yokuhambisa. Ubuncinci koku kuvuza kokuqala akukwazanga ukubona.
Amaqhinga okusebenzisa iVenkile kaGoogle yokudlala ngendlela ebalaseleyo
Sikwafumana ii icon ezintsha. Ayothusi, kuba kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwabhengezwa ukusukela oko baya yazisa ii icon ezintsha evenkileni. Ke ngale ngqiqo, besele sisazi ukuba silindele ntoni kwivenkile. Inkampani ikhethe ii icon ezinemiphetho ejikelezileyo, ebonakala ngathi ziintandokazi zikaGoogle. Zidityaniswe ngcono ngale ndlela kubuhle obutsha obufunwayo.
Olu luyilo lubonwe kule nguqulo ye-14.5.52 yeGoogle Play. Nangona okwangoku abasebenzisi abaninzi bengenako ukufikelela kuyo. Okwangoku, iimvavanyo ziyenziwa ngayo. Ke asazi ukuba kuya kuthatha ixesha elingakanani ukwazisa ngokusesikweni kubo bonke abasebenzisi abakwi-Android. Ngokuqinisekileyo baya kusishiya neendaba ezininzi malunga noku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ukudlala kukaGoogle sele kuvavanya uyilo olutsha lwezinto ezibonakalayo